I-Postbox - Ukupheka ngokwakho eCarradale, e-kintyre - I-Airbnb
I-Postbox - Ukupheka ngokwakho eCarradale, e-kintyre
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnnik
Balekela kwi-Postbox ese-Carradale kunxweme lweMpuma ye-Kintyre Peninsula uze uphumle kwindawo epholileyo engaphakathi ye-Scandi, ejikelezwe ziilwandle, uhambo lwamahlathi kunye neziqithi onokuzibuka. Dibana nesantya esicothayo sobomi, wonwabele ubuhle bendalo, uze uzipholele kwiivenkile zokutyela ezininzi zasekuhlaleni kunye neGin kunye neWhisky Distilleries. I-Postbox ikwindawo ephakathi kwidolophana ethuleyo yokuloba, iPostbox ikude ngeemitha eziyi- ukusuka kwibala legalufu leCarradale kunye nokuhambahamba imizuzu eyi-5 ukusuka elwandle.
Ibhokisi yeposi ime kwidolophana yaseCarradale kwaye ihlala isiqingatha sendlwana yokuqala kunye neentaka, ii-micro-salon hairdressers kunye neenwele.
Ibhokisi yeposi ibonisa i-Nordic yaseKintyre kunye nesitayile sanamhlanje se-Scandi kuyo yonke indawo yesitudiyo. Kwibhokisi yeposi uza kufumana isitovu seenkuni esinezitulo ezimbini ezitofotofo ezinamaqweqwe amakhulu acocekileyo onokungena kuwo uze wonwabele ukufudumala komlilo.
Ungabukela ihlabathi lisuka kwitafile yokutyela ebekwe efestileni ngaphambili.
Vuka uzive uhlaziyekile kubusuku obumnandi bokulala kwi-scandi style birch bed. Izinto zokondlula ibhedi neetawuli ezongezelelekileyo xa uzidinga zigcinwe kwiibhaskithi ezirawundi phantsi kwebhedi.
Ikhitshi line-hob yombane neoveni, i-grill, i-microwave, iketile, i-toaster, ifriji enefriji. Igumbi leshawa elineshawa, indlu yangasese, isitya sokuhlamba neetawuli ezifudumeleyo.
ICarradale yindawo emangalisayo ejikelezwe ziindawo ezintle, ulwandle, iintaba, amahlathi kunye namahlathi. Yonke le nto ikuhambo lokubethwa ngumoya kumnyango wangaphambili. Le lali inceda ngokuba namagumbi amabini okuphunga iti, iibhari ezimbini kunye nesalon yeenwele ezincinci. Isaluni encinci ivuliwe ukususela nge-10 ukuya kutsho nge-6 ngoLwesithathu, ngooLwezine nangoLwezihlanu nange-10 ukuya kutsho ngo-4 ngeMigqibelo.
Sihlala nje ngaphaya kwendlela kwizindlu ezisemaphandleni kwaye sisebenza kwisalon yeenwele, ngoko asikaze sibe kude kangako ukuba uyasidinga okanye unemibuzo. Sisoloko sikuvuyela ukwabelana ngamacebiso ethu ngeendawo onokutyelela kuzo nokutya, uhambo lwasekuhlaleni kunye neendawo onokuzonwabela ngexesha lokuhlala kwakho.
Sihlala nje ngaphaya kwendlela kwizindlu ezisemaphandleni kwaye sisebenza kwisalon yeenwele, ngoko asikaze sibe kude kangako ukuba uyasidinga okanye unemibuzo. Sisoloko sikuvuyela…